Ifriji yesiselo yaseTshayina, umboneleli ogqwesileyo wesikhenkcisi sesifuba uMvelisi noMboneleli |I-ONRUN
Isikhenkcezisi sesiselo, oyena mthengisi wefriji yesifuba
Ubungakanani bangaphakathi: 280 * 320 * 1300mm
Ubungakanani: 360 * 365 * 1880mm
Ubungakanani bokupakisha: 456 * 461 * 1959
Ulawulo lobushushu:ulawulo lwezandla
uhlobo lokupholisa:ukupholisa isicompressor + umncedisi wefeni
amandla okupholisa: 120w
ukusetyenziswa kwamandla: 1.7kwh/24h
unikezelo lwamandla: 220-240v/50hz .110v/60hz
ishelufu: 5 adjustable
umthamo wokulayisha: 60pcs/20gp 130pcs/40gp 130pcs/40HQ
Amava olawulo lweeprojekthi ezityebileyo kunye nemodeli yenkonzo enye yenza ukubaluleka okuphezulu konxibelelwano lweshishini kunye nokuqonda kwethu ngokulula okulindelweyo kwikhabhinethi yokubonisa uMenzi weglasi, Samkela ngokunyanisekileyo ngokulinganayo phesheya kunye namaqabane oshishino lwasekhaya, kwaye sinethemba lokusebenza kunye nawe ngexesha. ukusondela kwikamva elibonakalayo!
Njengomenzi oqeqeshiweyo wekhabhathi yokubonisa iglasi, Ngexesha leminyaka eyi-11, Ngoku sithathe inxaxheba kwimiboniso engaphezu kwama-20, sifumana eyona ndumiso iphezulu kumthengi ngamnye.Inkampani yethu ibinikezela ngalo "umthengi kuqala" kwaye izibophelele ekuncedeni abathengi bandise ishishini labo, ukuze babe yiBoss enkulu!
Ikhabhathi yesiselo se-Onrun okanye ikhabhathi yokubonisa isiselo, isetyenziselwa ikakhulu kwiivenkile zokuthenga okanye iivenkile eziluncedo ezisetyenziselwa ukumisa umboniso weziselo efrijini, i-onRUN ikhabhathi yesiselo yenziwe yinkqubo yefriji, inkqubo yokukhanyisa kunye nebhokisi, inkqubo yefriji nge-compressor, i-condenser, i-evaporator, i-valve yokwandisa. okanye ityhubhu yobhedu ye-capillary.Izinto eziphathekayo zebhokisi yiplate yensimbi yombala kunye ne-lacquer plate, kunye nezinto ezikhuselayo phakathi kweplate zenziwe nge-polyurethane foam.
Ngaphambili: ifriji yokuthengisa ehoseyile, ikhabhinethi ebonisa ngeengcango zeglasi
Okulandelayo: isiselo esipholileyo, abavelisi bekhabhathi yokubonisa yanamhlanje
Isibandisi esiNcinane sokuBonisa i-40L yeHotele yeBha yesiSiko ...
Iingcango zeglasi eziziThulula ngokuzenzekela iDispla yoRhwebo...
Umzi-mveliso othengileyo woRhwebo oluthambileyo lwe-Ice Cream Mak...